IBrookings Harbour Ithenga iDredge entsha, Ucwaningo lwe-Gov-Self Managed Case Study
I-Ellicott Brand® Dredge entsha yePort of Brookings Harbour e-Oregon
Source: I-Curry Coastal Pilot
I-Port of Brookings Harbour is ophethe indawo entsha ethengiwe yisifundazwe sase-Oregon yokusebenzela amachweba aseningizimu nosawoti asuka eReeds to Brookings.
Izikhulu zamachweba ama-Brookings ziqhubekile nomzamo wokuthenga lo mbuso futhi umbuso wakhetha ichweba elizobheka ukusebenza kwalo ogwini, kusho umphathi wePort Ted Fitzgerald.
I-dredge, i-Ellicott® brand 360 Swinging Dragon® Dredge, iseBandon kuleli sonto, ikhipha ama-cubic yards angama-40,000 ethekwini. I-dredge entsha izosetshenziselwa ukususa imfucumfucu efana nodaka, amadwala, kanye ne-slime eqoqana ethekwini, izinto ezivame ukwenza kube nzima ukuthi izikebhe zihambe emabhodini ezikebhe.
Udoti oqoqwe yi-dredge entsha ethekwini leBrookings uzobekwa endaweni ye-EPA etholakala cishe ngamamayela we-2.
"Isifundazwe sase-Oregon siphume siyofuna ibhidi sayothenga isibhedlela," kusho uFitzgerald. "ISouth Coast Ports Coalition, okubandakanya onke amachweba asuka eReedsport kuya eBrookings, iqale ukuphakamisa umbono wokuthi kuzokwakhiwa kabusha ku-Oregon Coastal Caucus."
Abasebenzi besiteshi saseBrookings bathole ukuqeqeshwa, okwamanje, ama-Brookings kuzoba kuphela opharetha. Ekugcineni, uFitzgerald uthe, iPort of Coos Bay izophinde iqeqeshe abasebenzi kule ndawo eyakhiwe kabusha.
"Iningi lamanye amachweba alinazo amakhono okusebenza," kusho uFitzgerald, "Futhi sesivele sinesipiliyoni."
UFitzgerald wengeze ngokuthi ngokwe-Army Corps of Engineers, amachweba avumelekile kuphela ukwehla ngo-Okthoba kuze kube nguFebhuwari. Ngokujwayelekile, uthe, lesi yisikhathi esijwayelekile samachweba okuzijabulisa.
"Umbono ngukuthi singathatha abanye babasebenzi bethu sibaqeqeshe lapho behamba ngezinyawo, ngesikhathi lapho kwakuvame ukuthi sibeke phansi abantu," kusho uFitzgerald.
UFitzgerald wengeze ukuthi lapho le dredge ingasasebenzi, unethemba lokuyikhipha emanzini ukuyigcina, mhlawumbe isendaweni eseduze nomsebenzi wayo olandelayo. Imininingwane yokuthi lo dredge uzogcinwa kuphi, uthe, iseyimisebenzi.